लाठी युगतिर ?
नीतिमध्येको अब्बल राजनीतिलाई मान्ने गरिन्छ। तर हाम्रो देशमा भने राजनीति भनेको सबैभन्दा सडाहा कुरा हो भन्ने सबैलाई परिरहेको छ। यसो हुनुमा हाम्रा नेताहरूको देन हो भन्नलाई हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था पनि छैन।
जनअपेक्षाको कदर गर
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यपछि जनताले आशा गरेको भनेको उनीहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वस्तुहरूको शान्तिपूर्ण रुपमा उपभोग हो । साथै द्वन्द्वको क्रममा मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोरेका पीडित एवम् उनीहरूका परिवारले
अनेकथरीका बन्दको दृश्य देख्दै आएको धरहराले बुधबार फरक खाले बन्द देख्यो। जे भए पनि राजधानीबासीलाई बन्दकर्ताहरूले सधै सताउने गर्दै आएका छन्। हिजोको बन्दमा भने सडक छेऊका घर भत्काइएकाहरूले बन्द गरेको
नेताज्यूहरूको हर्कत देखेर कहिलेकाही धराहरालाई दिक्क लाग्ने गरेको छ । जिम्मेवार नेता तथा मन्त्रीहरूले गर्ने हर्कतले अनौठो र लाजमर्दो दृश्य पनि देख्नुपर्छ यो दुनियामा । हिजो सोमबार व्यवस्थापिका संसद्मा अनौठो
नयाँ वर्षको गन्थन
आइतबार सन् २०१७ को नयाँ वर्षको अवसरमा चिसोमा चिया पिउँदै यो धरहराको वरपर आउने गफाडीहरू निकै बढे। एकथरीले त्यहाँ पुगेर अस्ति शनिबारबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जन्मेको डडेल्धुराको अशिग्राम
कहिलेकाही भनिन्छ– नेपाल सतीले सरापेको देश हो । त्यही भएर नेपालमा राम्रो काम गर्नेहरूलाई कहिले प्रोत्साहन हुदैंन र जो पनि खुट्टा तान्न खोज्छन् । हाम्रा उर्जा मन्त्री जर्नादन शर्मा पनि
जसरी पनि ?
संबिधान संसोधन बिधेयकका बिषयमा अहिले गर्मागर्मी बहस भइरहेको छ । सत्ता पक्षले संबिधान संसोधन जसरीपनि पास हुने बताउनुले शंका उत्पन्न गरेको छ धरहराले देखेको छ । हैन जसरीपनि पास हुन्छ
सार्वजनिक विदा माग्ने होड
राजतन्त्रको औपचारिक समाप्तिपछि जारी भएको तत्कालीन अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाललाई धर्मनरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्यो। त्यो घोषणासँगै नेपालका विभिन्न जातजाति र धर्मसम्प्रदायले मनाउने चाडपर्वहरूमा सार्वजनिक विदा दिने चलनको शुरुआत भयो।
कस्तो मानक ?
हाम्रो त्रिभुवन विश्व विद्यालयको दीक्षान्तका लागि उपकुलपतिले सही गरेर पठाएको एउटा कार्डमा देखिएका गल्तिको विवरण देखेर अहिले धरहरा वरपर खुब चर्चा भइरहेको छ। भाषाको संरक्षणका लागि त्रिवि हो कि बिनासको
नेपाल चीनसँग कुनै न कुनै हिसाबले जोडिएको कुरा बाहिर आएपछि भारतीय मिडियामा हल्लीखल्ली हुने गरेको धरहराले देख्दै आएको छ। हिजो मंगलबार पनि मूलधारका भारतीय पत्रिकाहरूमा यस्तै एउटा चर्चाले हल्लीखल्ली मच्चिएको